Tit Tok မှာ Pro Account ရပြီ။ : A Creative Digital Agency - Digital Dots
Tit Tok မှာ Pro Account ရပြီ။
Tik Tok က Content Creators တွေအတွက်ကတော့ ဝမ်းသာစရာသတင်းပါပဲ။ Tik Tok ကနေပြီး Pro Account ဆိုပြီး အသစ်ထပ် မိတ်ဆက်ထားတာ တစ်ခုရှိပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ Video Performance တွေနဲ့ Insight တွေကို Pro-Account မှာ ပြန်ကြည့်လို့ရမှာပါ။
ဒီ Pro Account က analytics tool ဟာ အပတ်စဉ်၊ လစဉ် ဗီဒီယိုကြည့်ရှူမှုတွေ၊ Follower အတက်အကျနဲ့ ခေတ်စားတဲ့ ဗီဒီယိုတွေကို ပြသပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ tool ကြောင့် ပိုကောင်းတဲ့ Video တွေကို ဖန်တီးလာနိုင်မှာပါ။
ဒါဆို Pro Account ရအောင် ဘယ်လို လုပ်မလဲ?
အရင်ဆုံး ကိုယ့်ရဲ့ Profile Page ကိုဝင်ပါ။ ပြီးရင် Privacy & Settings Tab ကိုသွားပါ။
Manage My Account ကိုရွေးပါ။
Switch to Pro Account ကို တွေ့ပါလိမ့်မယ်။
Pro-Account ပွင့်သွားတာနဲ့ Account Option အောက်မှာ Analytics ဆိုတဲ့ ခလုတ်လေးကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။
ကဲ Pro Account ပြောင်းပြီး ပိုကောင်းတဲ့ ဗီဒီယိုတွေဖန်တီးလိုက်ပါတော့။
How has Aurora Business Tower's Fun Post gone viral?
A local ride-hailing service, Yes Boss have got over 7K+ leads within one month
အာဇာနည်နေ့ Creative Design & Video လက်ရာများ
သင့် E-commerce Website အတွက် အခုပဲ လိုက်လုပ်နိုင်တဲ့ SEO နည်းလမ်းများ
SEO Minion Extension - မှတ်မှတ်ရရ Extension လှလှ #1
2019 Updated Myanmar Fintech Report
© Digital Dots 2019. All Rights Reserved.